Ungayisebenzisa Kanjani iDiscord ku-Xbox One? - Ukudlala
IDiscord kulezi zinsuku ingena esikhundleni sokusethwa kwendabuko okungaphakathi kwegeyimu. Njengoba ungajoyina amaseva, ulalele umculo, futhi uhleke ngisho nama-meme amahle, iDiscord iyindlela ethandekayo yabadlali bamageyimu. Kodwa-ke, iminyaka abadlali be-console bathola indlela yokuthola iDiscord kumasistimu abo. Kulokhu okuthunyelwe, sizobe sidingida ukuthi ungayifaka kanjani i-Discord ku-XBOX One.
I-Xbox One ene-Discord?
Nokho iDiscord iyindlela efanelekile yokuxhumana, awuphoqelekile ukuyisebenzisa. Imakrofoni yomdlalo we-Xbox eyodwa iyasekela futhi ayithathi leso sikhala 'esengeziwe' ku-Xbox yakho.
Njengoba sonke sazi, ama-Xbox consoles enzelwe nje ukudlala; ngokulayisha eceleni, uhlelo lokusebenza olukhulu olufana ne-Discord luzophazamisa ukusebenza kwe-Xbox yakho. Kunesizathu sokuthi onjiniyela bangavumeli uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu olufana nalezi. Ngaphezu kwalokho, imodi yephathi isekelwa yi-Xbox, futhi isivele inendlela engcono kakhulu yokuxhumana nabangane bakho. Ngezinyathelo ezifakiwe kokuthunyelwe kwethu, ungabonisa kalula kubangani bakho konke okudingayo. Inkinga yokuxhumana ingaxazululwa kalula ngemodi yephathi enelungelo lobunikazi le-Xbox.
Okuthunyelwe Kwamuva:Ingabe uyazi? INintendo Shintsha 2 izokwethula ekuqaleni kuka-2021.
Izinyathelo zokufaka i-Discord ku-XBOX One:
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ebukhoma ye-Xbox.
Iya kuthebhu yezinhlelo, etholakala ngakwesokunene. Zulazula kukhetho lwe-akhawunti bese ukhetha ama-akhawunti axhunyiwe enhlalo.
Uzokwazi ukubona uphawu lwe-Discord olubheke ngakwesokudla sakho, uzulazule lapho, bese uchofoza kusixhumanisi. Qala inqubo bese uxhuma i-akhawunti yakho ye-Microsoft ku-Discord.
Lesi ngesinye sezinyathelo ezibucayi kakhulu; kuzokhonjiswa ikhodi enamadijithi ayisithupha esibukweni. Vula uhlelo lokusebenza lwe-Discord kufoni yakho / i-pc, bese uya kuzilungiselelo.
Manje hamba uye kumaqoqo, bese uzulazulela ku-Xbox bukhoma bese ufaka ikhodi esikrinini i-Discords ekuyisa kuyo.
Ngokwenza lokhu manje, i-akhawunti yakho ye-Xbox ixhunyaniswe nefayela lakho le- I-akhawunti ye-Microsoft . Kodwa-ke, abangani bakho bazokwazi ukubona ukuthi udlala ini. Lesi kungaba yisixazululo esinqunyelwe, kodwa ngeshwa, ukuphela kwaso okwamanje.
1Q. Ungayixhumanisa kanjani i-Xbox eyodwa ne-Discord?
Iminyaka:Yebo, ukufingqa, udinga ukunakekela izinyathelo ezintathu ezilula, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Microsoft, qala inqubo yokuxhumanisa i-akhawunti yakho ye-Xbox ne-Discord kukhonsoli, faka ikhodi enamadijithi ayisithupha kwi-Mobile / Tablet / PC yakho. Unesifinyezo esincane sezinyathelo kepha funda konke okuthunyelwe ukugwema noma yimaphi amaphutha.
2Q. Ingabe ukuxhumanisa kuwufanele?
Uma ukukhombisa abangani bakho lokho okudlalayo kungenye yezinto eziza kuqala kuwe, kufanelekile. Bazokwazi ukuqonda ukuthi udlala ngani kodwa bangaxhumani nawe. Okuwukuphela kwendlela yokuxhumana ngokusebenzisa imakrofoni yomdlalo.
Ukuphetha, akukho okubi ekuxhumaniseni i-Xbox yakho ne-Discord. Kulula impela, ngakolunye uhlangothi, futhi ungasebenzisa kuphela isevisi ngokwengxenye. Ngakho-ke ukuxhuma i-akhawunti yakho kuzoba wusizo kuphela. Njengoba kushiwo ngenhla, ufuna ukukhombisa abangani bakho ukuthi udlala muphi umdlalo. Sithemba ukuthi okuthunyelwe kwethu kukucacisele ukuthi ungayifaka kanjani i-Discord ku-Xbox. Uma ngabe uphumelele ukufaka iDiscord ku-Xbox, yenza imibono ebhokisini lokuphawula elingezansi.
I-PS5 vs Xbox Series X
Ungawathola Kanjani Amakhodi E-Xbox Live?
Ifilimu ye-Matrix 4 Science Fiction Action Ongeke Wakuphuthelwa
I-Blood of Heroes - Vula i-Beta kanye nolwazi lwedethi yokukhishwa